Sonos wuxuu soo bandhigayaa Sonos Dhaqaaqiisa cusub, si loogu raaxeysto codka ka baxsan guriga | Wararka IPhone
Sonos wuxuu rabaa inaan ku raaxeysano muusigeyga meel kasta, waana taas sababta ay u soo bandhigeen Sonos Move cusub, afhayeen sameeya oo cadeynaya in qaadista gawaarida aysan aheyn inay ka horimaado tayada. Iyada oo tobanka saacadood ee madax-bannaanida, shahaadadeeda IP56 iyo iswaafajinta AirPlay 2 iyo Bluetooth, waa Sonos kii ugu horreeyay ee aan loo baahnayn inuu ku xirnaado shaqada.
Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale soo bandhigay Sonos One SL cusub, makarafoon looma hayo kuwa ka guuraya kaaliyeyaasha dalwaddii, iyo dekedda cusub ee Sonos, ku-xigeenkii Sonos Connect si uu u keeno codka caqliga badan ee Sonos ee stereos dhaqameed. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta hoose.
1 Sonos dhaqaaq
2 Sonos One SL iyo Sonos Port
Hadal caqli-gal ah oo loogu talagalay inuu ahaado meel kasta, gudaha ama dibedda gurigaaga. Waa Sonos, taas oo macnaheedu yahay in lagu daro dhammaan nidaamkii hore, oo ay ku raaxeysato dhammaan shaqooyinka laga heli karo codsigeeda, iyo in tayada codka aan shaki ku jirin. Laba kordhiyeyaal-D-dheereeye ah, tweeter hoos-u-hagaya iyo bartamaha woofer oo la dhisay ayaa dammaanad ka qaadaya waayo-aragnimo dhawaq heerka Sonos na caadaystay. Dabcan waa la jaan qaadayaa AirPlay 2, waadna ku dari kartaa Alexa ama Google Assistant, sidaad doorbideyso, si afarteeda makarafoon aad codkaaga kula qabsan karto.
Laakiin waxay leedahay astaamo kale oo gaar ah, sida batteriga isku dhafan oo siinaya madax-bannaanida 10 saacadood oo shaqeynaya, illaa 120 saacadood oo heegan ah. Waxaa dib looga buuxiyaa iyada oo loo marayo USB-C ama saldhigga lacag bixinta ee lagu daray, si aad had iyo jeer ugu haysato saldhigeeda oo aad u qaadatid si aad ugu raaxaysatid codka goob kale. Hadana haddii aad u qaadatid halka uusan WiFi gaagu gaarin, ha walwelin, maxaa yeelay qalabkaaga ayaad ku xiri kartaa Bluetooth. Qiimaheedu waa € 399 waxaana lagu heli karaa oo kaliya madow. Hadda waad keydin kartaa oo waxaa laga heli doonaa laga bilaabo Sebtember 24 Spain iyo Mexico, marka lagu daro Mareykanka iyo wadamada kale ee Yurub.
Sonos One SL iyo Sonos Port
Sonos ma rabin inuu iska iloobo kuwa aan dooneynin kaaliye macmal ah oo ku hadla afkooda, in kasta oo alaabtooda oo dhan ay tahay wax la furi karo, xitaa makarafoonka waa la aamusiyaa, maxaad wax badan uga bixineysaa wax aadan adeegsan doonin ? Sidaas ayaa la gudbiyay Sonos One SL, oo ​​ah Sonos One oo aan lahayn kaaliye tabarucaad ah € 199 kaas oo la heli doono laga bilaabo Sebtember 12.
Ugu dambeyntiina, Sonos Port ayaa sidoo kale na tusisay, cusbooneysiinteeda Sonos Connect, oo u adeegta ballaarinta nidaamka Sonos ee stereos dhaqameedka iyo qaatayaasha. Qiimaheedu waa 399 12 waxaana la heli doonaa laga bilaabo 2020-ka Sebtember oo ku saleysan xaddidan, iyadoo helitaan buuxa laga helayo Janaayo XNUMX.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sonos wuxuu soo bandhigayaa Sonos Move cusub, si loogu raaxeysto codka ka baxsan guriga
SensorKit wuxuu noqon karaa xirmada soo socota ee Apple cilmi baarista iyo horumarinta
Telegram wuxuu horey noo ogolaaday inaan jadwal u dirno dirista fariimaha